Prakash Khabar:: मेरो मुमा विधवा हो एकल होइन Prakash Khabar
मेरो मुमा विधवा हो एकल होइन
November 24, 2019 | 1406 Views
खगेन्द्रराज सिटौला /
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थामा काम गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको लगानीमा संस्था चलाउने महिलाहरुले एउटा अभियान चलाए लोग्ने मरेका स्वास्नीमान्छेहरुलाई विधवा भनिदै आएकोमा अब देखि विधवा होइन एकल महिला भन्नु पर्छ । उनीहरुले मिडियालाई प्रभाव पारे लेखे प्रचार गरे जनमत बनाएर लगे । धेरै महिलाहरु यसैको पछि कुदे । हाँमा हाँ मिलाउदै पुरुषहरु पनि यही शब्दजालको पछि कुदे । सबै राजनीति दलका महिला नेतृ र सँगठनहरु एकल महिला नलेख्दा क्रान्तिकारी नहोइएला वा महिलावादी नहोइएला भन्ने डरले सबै एकल महिला भन्दै कुदे । सबै अगुवा महिलाहरु एकल भन्दै कुदे पछि विधवालाई एकल भनिएन भने त महिलाको भोट नै आउँदैन भन्ने डरले पनि सबै राजनीति दल तथा नेताहरु सबै एकल एकल भनेर चिच्याउन थाले । मानो एकल भन्नु महान क्रान्तिकारी हुनु हो र विधवा भन्नु पुरातनपन्थी, सामन्तवादी वा प्रतिगामी हुनु हो भन्ने उनीहरुमा गलत धारणाको विकास भएर गयो र ठूलठूलो स्वरले एकल भनेर कराउन थाले । सबै पार्टीहरु कराए पछि पार्टीकै सरकार त लतारिने नै भयो । अनि त औपचारिक रुपले नै लतारिएर विधवालाई खारेज गरेर एकल भन्न र लेख्न थाल्यो ।
यो लेखको विषय प्रवेश हो । यो लेखको मूल उद्देश्य विधवा र विधुरको पर्यावाची शब्द एकल हुन सक्तैन र विधवा लेख्दा वा भन्दा महिला कमजोर हुने र एकल लेख्दा बलियो र शक्तिशाली हुने जुन भ्रम पारिएको छ त्यसलाइ चिर्न कोशिस गर्न हो एउटा । एकलले नेपालको परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्थाको मात्र होइन स्वयं महिलाको पनि अपमान गरेको छ तर्क र तथ्य अधि सार्दै विधवा भन्न हुन्छ भन्ने बोध गराउनुु हो अर्को ।
“एकपटक ‘विधवा’ शब्दको अर्थ हेरौंन । ‘विधवा’ संस्कृत शब्द हो । यो शब्दलाई विग्रह गरेर हेरौं । ‘धव’ भनेको लोग्ने हो । ‘वि’ भनेको नभएकी । यसलाई समास गर्दा यसको अर्थ ‘विधवा’ अर्थात ‘लोग्ने नभएकी’ भन्ने लाग्छ । ‘सधवा’ को अर्थ ‘लोग्नेसहितकी’ भन्ने हुन्छ । त्यस्तै विधुरको अर्थ पनि पत्नी नभएको भन्ने हुन्छ । विधुुर पनि संस्कृत शब्द हो”। – विनु पोखरेल, टुइटरबाट) । हाम्रा शब्दका श्रष्टाहरुले शब्द निर्माणमा कुनै कन्जुस्याईं गरेको छैन । महिलाई विधवा भनेका छन् भने पुरुषलाई विधुर भनेका छन् । न विधुर भन्दा पुरुषको अपमान हुन्छ न विधुवा भन्दा महिलाको अपमान हुन्छ । विधुर र विधवा शब्दले स्वास्नी र लोग्ने मरेका पुरुष तथा महिलालाई समान व्यवहार गरेको छ । यी शब्द अपमान बोधक शब्द हुँदै होइनन् । अझ ठेट भाषामा विधुर र विधवाका पर्यायवाची शब्दको रुपमा राँडाराँडी भनि चल्तिका शब्दहरु छन् बढी अशिक्षित समाजमा । यहाँ पनि समान न्याय गरेको छ शब्दले लोग्ने र स्वास्नी मरेका महिला र पुरुषलाई । यी शब्द सुन्दा त्यति राम्रो सुनिदैन । बोल्ने शैलीले पनि यसको अलग अर्थ बोध गराउँछ ग्रामिण समाजमा । यही शब्दको प्रयोग गरेर मायालु पाराले छोराछोरी वा अरु बाहिरकालाई अह्राउने कराउने चलन पनि छ ग्रामिण समाजमा । तँ राँडा तँराँडी झगडाको बेला कराएमा गाली बोध पनि गराउँछ एउटै शब्दले । जे भए पनि विधुर र विधवा राँडा र राँडी एक अर्काका पर्यायवाची शब्द हुन् । एकले अर्काको अर्थ भार बोक्ने सामथ्र्य राख्छन् । तर एकल यी दुबैको पर्यायवाची शब्द हुन सक्तैन । र यसले माथि उल्लेखित शब्दहरुको अर्थभार पनि बोक्न सक्तैन । यो अर्थको अनर्थ हो । यो शब्दको बलजप्mति दुरुपयोग हो ।
मैले थाहा पाउँदा गाउँमा एकजना बुढा मान्छे थिए । उनलाई सबैले एक्ले बुढा भन्थे । उनी घरमा एकलै बस्थे र आप्mनो सबै काम एक्लै गर्दथे । उनले कहिल्यै विवाह गरेनन् र जहान परिवारसँग पनि बसेनन् । त्यसैले उनी एकल हुन् तर विधुर होइनन् । उनको साँईलो दाजु र भाउजू सारै मिलेका थिए । भाउजू मरिन् । उनले अर्को विवाह पनि गरेनन् । छोरा बुहारी नाति नातिनी आदि जहानसँग उनीहरुको माया पाएर सुखी र खुशी भएर बसे । उनी विधुर जरुर हुन तर एकल होइनन् । किनभने उनकी श्रीमती छैनन् तर पनि उनी एकल होइनन् । जहानसँग बसेको मान्छे कसरी एकल हुन्छ ? एकले बुढाको यो दाजुको कुरा भयो । कान्छा भाइको उनीहरुको भन्दा फरक छ । एकलकाँटे स्वभावको कान्छो भाइ कसैसँग नमिल्ने । स्वास्नीसँग पनि झगडा गरिरहने छोराछोरी बुहारी नातिनतिना कोहीसँग नमिल्ने । उ जहानसँगै छुट्टिएर सानो घर बनाएर एक्लै बस्यो । ऊ विवाहित एकल भएर बस्यो । उसको एउटा दाजु अविवाहित एकल अर्को दाजु विधुर तर नएकल होइन । यसले स्पस्ट गर्छ कि एकल शब्दले विधवा र विधुरलाई जाहेर गर्दैन । एकल भनेको एक्लो हो । कोही नभएको हो । एक्लो व्यक्ति, एक्लो परिवार, एक्लो नेता, एक्लो देश, एकल अंश आदि । पश्चिमाहरुले पैसा दियो भन्दैमा नेपाली शब्दहरुलाई जता पनि बटार्न पाइन्छ ? जे अर्थ लाउन पनि पाइन्छ ? विना कारण नेपाली शब्दहरुलाई विस्थापित गर्दै लान पाइन्छ ? अरु त अरु भाषाहरुको संरक्षण गर्न बसेको सरकार यसरी लतारिएर एकल एकल भन्दै हिड्न मिल्छ ? एकल भत्ता रे । विधुवा भत्ता विधुर भत्ता भन सरकार ।
एकलवादीहरुले नेपाली परिवार व्यवस्था र नेपाली समाज व्यवस्थालाई अपमान गरेका छन् । नेपाली विधवाहरुको अतिरञ्जन दयानीय अवस्थाको प्रोफायल बेचेर डलरको खेती गरेका छन् । मानो एकल महिला भनेको उ पर छाउपडी गोठ जस्तैमा एक्लै बस्ने महिला हो । जसलाई एकल हुने वित्तिकै परिवारले खेद्छ समाजले खेद्छ जसको परिवार पनि हुँदैन नातागोता पनि हुँदैन लोग्ने वा स्वास्नी मरे पछि सबै सकिन्छ उ फगत एकल हो भन्दै एकलको दयनीय अवस्थाको चित्रण गरेर डलरको खेती गरेका होलान् । अनि यस्ताहरुको पछि सति जाँदै सरकारी संयन्त्र नेपाली शब्दहरुलाई विस्थापित गर्दै हिड्छ । राजनीति दलहरुले पनि कुन शब्दलाई किन प्रयोग गर्ने किन नगर्ने के अर्थ बोक्छ के बोक्दैन छलफल गर्नु पर्दैन ?
हाम्रा बुबा स्वर्गीय हुनु भएको २५ वर्ष भन्दा बढ्ता भएको छ । अर्थात मेरो मुमा विधवा भएको त्यतिनै वर्ष भएको छ । मेरो मुमा विधवा हो तर एकल होइन । बुबाको स्वर्गवास भए पछि हामीले मुमाको झन् सम्मान बढाएका छौं । मुमा छोरा बुहारी नाति नातिना छोरी ज्वाइँ आदि इत्यादि सबै नाता गोतासँग हाँसीखुसी रमाएर बस्नु भएको छ । यही मंसिर तीन गते हामीले मुमाको ९० औं जन्मोत्सव मनायौं । के यसले मुमा एकल होइन भन्ने कुरो पुष्टि गरेन र ? मुमा १० वर्ष भन्दा धेरै अमेरिकामा कान्छो छोरा कान्छी बुहारी नातिनी आदि परिवारका सदस्यहरुसँग रमाएर नेपाल आउनु भएको हो । एनजिओवालाहरु, सरकारवालाहरु, दल र दलका महिला सँगठनवालाहरुलाई हाम्री विधवा मुमालाई एकल भनेर मुमा र परिवारको अपमान गर्ने अधिकार कस्ले दियो ? विधवा भएका तर एकल नभएका यस्ता सम्मानित मुमाहरुका उदाहरण देशै भरि पाइन्छ । हो विधवाहरुका नकारात्मक पाटो धेरै छन् । विधवा भएकै कारणले हेपिएका ठगिएका उदाहरुण पनि धेरै छन् । तर तिनको पक्षमा उभिने पनि त्यतिकै हुन्छन् र उनी एकल होइनन् भनेर साक्षी बनिदिन्छन् ।
मेरी श्रीमतीकी आमा वाल विधवा हुुनुहुन्थ्यो । बुबा विधुर भएपछि पुन विधवा र विधुरको विवाह भएर एउटा सभ्य र भव्य परिवार भएको थियो । बुबाको स्वर्गवास भएपछि आमा पुन विधवा हुनुभयो । तर उहाँ पनि मेरो मुमा जस्तै परिवार माझमा सम्मानित हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो कालमा पनि । कसले भनेको छ उमेरमा नै विधवा भएकाले जीवनभर अविवाहित भएर बस्नुपर्छ भनेर । धर्मशाश्त्रले पनि भनेको छैन, समाजशाश्त्रले पनि भनेको छैन । नत्र मेरा सासु ससुराको आज भन्दा भण्डै ७० वर्ष अघि कसरी विवाह हुन्थ्योर ? मेरा हजुरबुबालाई एकले ¬(एकल) भन्थे । उहाँ एकजना मात्रै भएको अन्य दाजुभाइ नभएको कारणले । हजुरआमा वितेको १६ वर्ष पछि उहाँ वित्नु भयो । उहाँ पनि विधुर हो तर एकल होइन । माथि नै भनियो परिवार माझमा भएको परिवारको कुनै सदस्य विधवा या विधुर हुनसक्छ तर एकल हुन सक्तैन ।
हाम्रो हजुर बुबाको जेठी छोरी अर्थात हाम्री जेठी फुपु तीस वर्षमा नै विधवा हुनुभएको थियो । फुपुकी माहिली छोरी पनि वाल विधवा हाम्री प्रिय माल्दिदी । फुपुलाई देवरले सम्पतिको याने अंशको हक दिन नखोज्दा बुबाले मुद्दा लडेर फुपु र दिदीलाई अंश दिलाएको पनि पचास वर्ष नाघि सकेछ । खोइ एकल ? पछि विधवा माल्दिदीले विधवा आमालाई राम्ररी पाल्नु भयो । माल्दिदीकी मितिनी पनि विधवा नै थिइन् । हामी गुरुमा भन्थ्यौं । धेरै वर्ष उहाँहरुको माया पाएर एकै घरमा एकै जहान परिवार भएर लामो समय बस्ने सौभाग्य मिलेको थियो । अझै एकल भनेर विधवा र नेपाली परिवारलाई अपमान गर्छौं ?
सबैलाई थाहा छ विद्यादेवी भण्डारी जननेता मदन भण्डारीकी श्रीमती हुन भनेर । विद्या भण्डारीलाई एकल महिला भन्न मिल्छ ? सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राज्य परिवारसँग समेत बस्नु भएको छ । यसरी राज्य परिवारसँग बसेकी राज्यको अभिभावकलाई एकल भन्न मिल्छ ? नेपालमा एनजिओहरुले भने जस्तो विधवाहरुको जीवन गएगुज्रेको मात्रै छैन । केही विधवाहरुले राम्रै उन्नति प्रगति पनि गरेको छन् अनेक क्षेत्रमा । तर पनि विधवा र विधुर भए पछि जीवन कठिन हुन्छ दुबैको । उदास पनि हुन्छ । तर पनि उनीहरुलाई एकल भन्न मिल्दैन ।
नेपालमा एक समय यस्तो थियो जहाँ विधवाहरु साँचै एकल थिए । उनीहरुलाई विधवा भैसक्दा नसक्दा लोग्नेको लाससँगै जलाउन तयार गर्दथे । विरहमा परेकी ती कलकलाउँदी किशोरी वा युवती वाल विधवालाई जिउँदै जलाउनु हुन्न भनेर उनीको पक्षमा वा उनको ज्यान बचाउन बोल्ने कोही थिएनन् । न राज्य, न धर्म, न कानुन आमा न बाबु न दाजु न छिमेकी न आफन्त न समाज विल्कुल एकल । जुन दिन सति प्रथा अन्त्य भो एकल महिलाको दशा पनि अन्त्य भो । तर पनि विधवा महिलाका दुख त छन् नि तर पनि उनीहरु एकल छैनन् । दल छ, राज्य छ राष्ट्रपति सम्म बनाएको छ । असल सन्तान परिवार भए विधवा सधवा सबैलाई राम्रो गर्छन् खराब भए सबैलाई दुख दिन्छन् ।
सबैले सबै विधवा वा विधुरलाई माया र सम्मान गरौं । उहाँहरुलाई एकल भनेर अपमान नगरौं । एकल शब्दले नेपाल, नेपाली परिवार र समाजको बेइजत र अपमान गर्दछ । यसले हाम्रा राम्रा शब्दहरुलाई र हाम्रो भाषालाई समेत विस्थापित गर्दछ । निर्धक्क भएर विधवा र विधुर बोल्न र लेख्न थालौं ।
(यी लेखकका निजी विचार हुन ।)